विश्वविजेत अलेक्जेन्डर द ग्रेट सिकन्दर जब भारत आइपुगे, उनको भेट एउटा योगीसँग भयो । उनीहरुको भेट बडो रमाइलो र विचित्रको बन्यो । जब योगीले सिकन्दरलाई देखे, उनी जोडतोडले हाँस्न थाले ।
आफूलाई हेरेर योगी जोडतोडले हाँसेको देखेर सिकन्दरलाई अनौठो लाग्यो । उनले आफ्नो अपमान भएको सम्झिए । उनले आँखा तरेर योगीलाई हेरे । यस्तो देखेर योगी त झन जोडले हाँस्न थाले ।
सिकन्दरको रिसले सीमा नाघ्न लाग्यो । तर उनले आफूमाथि नियन्त्रण गरे किनकी अगाडि एउटा योगी थिए । उनले योगीलाई भने, ‘सायद तिमीले मलाई चिन्दैनौ वा तिम्रो मृत्यू नजिक आएको हो । तिमीलाई थाहा छैन, म विश्वविजेता सिकन्दर हुँ ।’
सिकन्दरको यस्तो कुरा सुनेर योगी झन जोडले हाँस्न थाले । उनले भने, ‘मैले त तिमीमा त्यस्तो केही महानता देखिनँ । मैले त तिमीलाई एकदमै दुःखी र दरिद्र देखिरहेको छु ।’ सिकन्दरले तत्काल भने, ‘तिमी बौलायौ कि के हो ? मैले संसार जितिसकेको छु । यस्तो कोही छैन, जो मेरो अगाडि आएर नझुकी रहन सकोस् ।’
योगीले ढिलो नगरी शान्त भएर भने, ‘यस्तो केही होइन । म तिमीलाई राम्रोसँग चिन्दछु । तिमी अहिले पनि एक जनसाधारण नै हौ । तर पनि तिमी भन्छौ नै भने म मानिदिउँला । तर अनुमति दिन्छौ भने म तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
सिकन्दरले शान्त भएर भने, ‘ठीक छ, भन ।’ योगीले भने, ‘मानौं कि तिमी कुनै मरुभूमिमा हराइरहेका छौ । महिनौं घुम्दा पनि तिमीले न निकास भेटेका छौ न पानीको थोपा । न हरियाली छ न कतै अरु मान्छे । त्यतिबेला तिमीलाई कसैले एक गिलास पानी दियो भने तिमी उसलाई के दिन्छौ ?’
सिकन्दरले केही समय सोचेर भने, ‘म आफ्नो आधा राज्य दिन्छु ।’ योगीले पुनः सोधे, ‘यदि उसले आधा राज्यले मानेन भने के गर्छौ ?’
सिकन्दरले भने, ‘त्यस्तो खराब अवस्थामा त म उसलाई आफ्नो पूरै राज्य नै दिनेछु ।’ योगीले हाँस्दै भने, ‘तिम्रो राज्यको मूल्य त एक गिला पानी मात्रै रहेछ । तर तिमी त्यही राज्यको लागि यतिसाह्रो घमन्ड गर्दछौ । सिकन्दर तत्काल योगीको पाउमा झुके ।
महाशिवरात्रीको रात सुत्नु हुँदैन, किन ?
भोलि महाशिवरात्री, यस कारण मनाइन्छ
यौनलाई सधैं किन पर्दा पछाडि राखियो ?
स्वामी विवेकानन्दको यो उपदेश, जसबाट सफलताको खास सूत्र जानिन्छ
जाडोमा नुहाउँदा विशेष ध्यान दिनुहोस्
तपाईंको पनि गर्लफ्रेण्ड छैन ? त्यसो भए यो अवश्य पढ्नुहोस्
संसारभर लोकप्रिय कौवा र मयूरको कथा, जसले तपाइँको आँखा खोलिदिन्छ
अब्राहम लिङ्कनका यी ९ वाणी, जसले तपाईंलाई खास मान्छे बनाउँछ
यो रोचक कहानीबाट जान्नुस् दु:ख र भयको वास्तविक कारण, तपाईंको आँखा खुल्छ
जब दार्शनिकले राजाको कुकुरलाई नदीमा फालिदिए …
चीनमा कम्युनिष्ट शासन सुरु भएपछि कै सबैभन्दा ठूलो संकट कोरोनाः राष्ट्रपति सि
बेइजिङ, ११ फागुन । चीनमा दुई हजार ४०० भन्दा बढीको ज्यान लिएको नयाँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको...
चर्चामा कट्रिनाको गाउन, मूल्य सुन्दा कान ठाडा हुन्छन्
एजेन्सी, ११ फाल्गुन । बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफले हालै लगाएको एक गाउनबारे निकै चर्चा भइरहेको छ । आफ्नो आउटफिटको मूल्यका...
दमौली, ११ फागुन । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ कृष्णमन्दिर बस्ने ६० वर्षीय रामबहादुर कार्कीको हत्या अभियोगमा मृतककी...